Kamely kamiao namboarina teratany namboarina ho an'ny famokarana serial | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral Anatolia03 AfyonkarahisarNy Fiakelan'ny kamela vita an-trano dia miomana amin'ny famokarana serial
11 / 01 / 2020 03 Afyonkarahisar, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Highway, Headline, fiara, TORKIA, VIDEO
Ny kamela Rock Truck rame ho an'ny famokarana serial
Ilay mpandraharaha Şuayp Demirel tao Afyonkarahisar dia nahavita namokatra kamiao fitaterana nofinofy 22 taona. Raha tsy ny motera sy ny boaty, izay vokarina eo an-toerana ary antsoina hoe "Camel kaya, dia afaka mitondra kamiao 30 taonina ny kamio." Ny minisiteran'ny indostria sy ny teknolojia koa dia manohana ny fandinihana natao mba hahafahan'ny kamio hanomboka ny famokarana faobe.
TORKIA PRODUCTION fahaiza-manao amin'ny zava-drehetra ao amin'ny firenena Fahaiza
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank, fotoana ela izay dia nanandrana ny kamio ny orinasa tao Afyonkarahisar'daki.
Ank O fitaovana tena mandaitra izany. Ny indostrian'ny indostrialy dia namolavola sy namokatra azy hatramin'ny voalohany. Nianjera raha te hampiasa azy io isika. Misaotra azy ireo be dia be aho. Torkia dia firenena iray izay manana ny fahafahana mamokatra ny zava-drehetra raha ny marina. Ny sarambidintsika lehibe indrindra dia ny olontsika. Firenena lehibe misy 82 tapitrisa izahay. Indrindra fa ny tanora tanorantsika no tena manan-talenta amin'io lafiny io. ”
Torkia nampiditra izao tontolo izao ny fiara ihany koa nanamafy fa ny olona mamorona hafanam-po lehibe Varank, "Raha Torkia mino ny fahafahana vokatra ny zava-drehetra. Ny iray amin'ireo ohatra tsara indrindra momba izany dia mijoro ao aorianay
Ny fahatsiarovana fa ny minisitry ny indostria dia miaraka hatrany amin'ny indostrian'ny indostria, hoy i Varank, "ilazako izany amin'ireo indostrialy rehetra; mampiasàm-bola amin'ny ampakarina, manome famokarana, asa. Miaraka aminao izahay ..
IREO TRANO IZY IANAO NO FAHAGAGANAANA ARY VEHIVAVY TSARA MBOLA
Kamiao rock an-trano, izay afaka mitondra vato sy vatobe be "voakaly", hoy izy fa ny famindrana kamiao Varank, orinasa mpandraharaha Şuayp Demirel'in izay mitantana io fiara io amin'ny fomba samy hafa sy ezaka nasehony.
Hoy ny minisitra Varank: «Izy ireo dia namolavola sy namokatra izany. Mampiasa am-pahavitrihana amin'ny toeram-pitrandrahana azy ireo izy ireo amin'izao fotoana izao. Ireo fiara rehetra ireo dia manafatra ara-dalàna nefa namokatra azy ireo hipetraka. Ity orinasa ity 'Izahay dia manao. Manao izany ny olona Tiorka 'hoy izy, mipetraka sy mamokatra, ary mazava ho azy, lafo vidy ihany izy ireo, na dia tsy ny toekaren'ity mpandraharaha ity aza ny hamokatra azy. 'Na ahoana na ahoana, dia mamokatra ny 20 amin'ireto aho isan-taona. Amidy aho, amidy aho, avelao aho hijanona 'hoy izy. Ireo fiara ampiasaina dia mahery ary mampandeha fiara. Eo am-panaovana fitiliana. ”
MAMPIAVAKA NY VAHOAKA IZANY TANY ITY
Rehefa nahazo diplaoma tamin'ny departemanta injeniera elektrika sy elektronika i Demirel dia nanomboka niara-niasa tamin'ny rainy tamin'ny atrikasa mpanao pandriana ary namokatra fitaovana ho an'ny marbra vita amin'ny marbra. Dehibe vatolampy sy ny manonofy ny famokarana kamiao any Torkia, izay miasa eo aminy hatramin'ny 1997, Demirel tamin'ny 2019 dia tanteraka izany nofy.
Ilay mpandraharaha Demirel, ny marbra vita amin'ny marbra, mamokatra milina izy ireo, iray amin'ireo asa lehibe indrindra amin'ireto toerana ireto dia ny fitaterana harambato amin'ny kamiao, hoy izy.
Demirel dia nilaza fa io orinasam-pitaterana io dia vita amina kamiao haingam-pandeha hatreto .. Orum efa niasa tamin'ity kamiao ity aho nanomboka tamin'ny 1997 ary nanomboka tamin'ny taona 2011 dia nanomboka nanao tsimbadika aho. Nanapa-kevitra ny hanangana ilay kamiao tamin'ny Janoary 2019 aho ary tamin'ny 29 Oktobra 2019 dia nataoko irery. Mitovy ny loharanon'olombelona, ​​mitovy ny loharano ara-teknolojia ampiasaiko. Raha oharina amin'ireo kamiao mahazatra mahazatra, dia fiara tsy misy lesoka izany. Afaka miasa amin'ny oram-panala, orana, fotaka ary havoana izy io. Nanapa-kevitra ny hanao izany aho satria fitaovana paikady ilaina indrindra. Nahomby tamin'ny fampialan'i Allah izahay. Izahay no nanao izany tamin'ity firenena ity. ”
AUTOMATIKA feno 6 ADVANCED GEARBOX
Demirel, ny kamiao mpitatitra entana eo an-toerana dia niteraka hafinaretana lehibe ary nanafaingana ny asa ho an'ny famokarana faobe, hoy izy.
Kamio, boaty 6-haingam-pandeha feno izay mandeha mamaritra ny Demirel, nilaza ilay mpamily fa ny eritreritra rehetra dia alaina.
Notsapaina ny Native Rock Truck 'DEVE'
Fiara National Wagon Miomana amin'ny Famokarana
Tranom-bokatra Tranom-bokatra 3 dia miomana amin'ny famoahana ny faritany
Tiorkia voalohany ao an-toerana Electric Truck: Anadolu Isuzu NPR10 HOUSE
Ny fanorenana ny tranoben'ny asphalt metaly dia manomboka ny famokarana
KARDEMİR Manomboka famokarana faobe amin'ny kodiaran-dalamby amin'ny volana septambra
Ny Factory Sivas Modern Sleeper dia nanomboka ny famokarana
Fandefasana entana miafina ankehitriny napetraka tao Sivas nanomboka ny famokarana
Sakarya miomana amin'ny fiaran-dalamby haingana
Ny tanànan'i Konya Metropolitan dia manomana ny hividy ny fiarabe fitaterana
Domelick kamio kamiao
kamiao fitaterana rock an-trano